अन्‍नपूर्ण पोस्ट् | शैली
बलिउडमा ‘सिरियल किसर' को छवि बनाएका अभिनेता इमरान हसमी अहिले पनि यस्तो छविप्रति गौरव गर्छन् । तर विवाहपछि पर्दाकै लागि भए पनि नायिकासँगको चुम्बनले उनलाई अप्ठ्यारो हुने गरेको छ ।...
विवाहपछि हनिमुन जानुपर्छ रे भन्ने कुरा कतैकतै सुनिएको थियो होला । तर, हनिमुन अहिलेजस्तो चल्तीको विषय थिएन र खल्तीमा पैसा पनि थिएन । त्यसैले हनिमुन घरमै मनाइयो।...
२०७३ जेष्ठ २१ शुक्रबार
हलिउडमा यति बेला चर्चित अभिनेता जोनी डिप र उनकी पत्नी डेनिस अभिनेत्री अंबर हर्डको सम्बन्धविच्छेदले चर्चा पाएको छ। डिपले आफूलाई आइफोनले हानेर घाइते बनाएको आरोपसहित ३० वर्षीया अंबरले अदालतमा डिभोर्स फाइ...
चलचित्रमा आउनुमा मेरी दिज्यूकी जेठानी स्व. इनु सिंहको सबभन्दा ठूलो हात छ। उहाँ र मेरो परिवारले चलचित्रमा काम गर नभनेका भए म कलाकार हुने सम्भावना थिएन किनकि त्यति बेला कलाकार बन्ने मेरो रुचि नै थिएन। इ...
आइफोनले हानेपछि डिभोर्स !!
हलिउडमा यति बेला चर्चित अभिनेता जोनी डिप र उनकी पत्नी डेनिस अभिनेत्री अंबर हर्डको सम्बन्धविच्छेदले चर्चा पाएको छ । डिपले आफूलाई आइफोनले हानेर घाइते बनाएको आरोपसहित ३० वर्षीया अंबरले अदालतमा डिभोर्स फा...
यी हुन् नेपाली चलचित्रका प्रतिस्पर्धी हिरो
२०७३ जेष्ठ १७ सोमबार
२००७ सालमा प्रवासमा पहिलो नेपाली चलचित्र सत्य हरिशचन्द्र बन्यो। नेपालमा निर्माण भएको पहिलो चलचित्रको श्रेय आमाले लियो। २०२२ सालमा प्रदर्शन भएको चलचित्र आमापछि मात्रै नेपाली चलचित्रमा नायकनायिका भनेर प...
यस्तो छ फेसन डिजाइनमा लविनको लक्ष्य
भोयज अफ क्रियसन २ नामक डिजाइनर प्रतियोगितामा विजेता बनेपछि आत्मविश्वास बढेको छ लविन राईको। 'डिभाइन डार्क' थिममा उनले प्रस्तुत गरेका ११ वटा पहिरनले प्रतियोगितामा उनलाई विजयी बनायो। ...
यस्तो छ परफ्युमको इज्जत र आकर्षण
मान्छे आफूलाई राम्रो र आकर्षक बनाउन अनेक शैली अपनाउने गर्छन्। अरूको ध्यान आकर्षित गर्न हेयर स्टाइल, पहिरन, गरगहनामात्रै होइन; परफ्युम प्रयोगमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन थालेका छन्। परफ्युमको वासनाले यसै...
शारीरिक निकटताले प्रेमलाई मीठो बनायो
२०७३ जेष्ठ १४ शुक्रबार
मैले नौ वर्ष अगाडि विवाह गरेकी हुँ। म र उहाँ (रविन लाकोल) ले प्रेमसम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका हौं। लगभग सात, आठ महिना चलेको हाम्रो प्रेमले सार्थक रूप लियो। कामकै सिलसिलामा मैले उहाँलाई भेटेकी थिएँ।...
लुलियाको कारण हैरान सलमान
बलिउड सुपरस्टार सलमान खान यतिबेला प्रेमिका लुलिया वन्तुरका कारण हैरान छन्। सलमान र लुलियाको प्रेमसम्बन्ध बाहिरिएपछि लुलियाका बारेमा अनेक गसिप आउने गरेको छ। ती गसिपले उनलाई हैरान बनाएको हो। ...